SAWIRRO-DHAGEYSO -Ciidamada Puntland oo qaraxyo ku qabtay Magaalada Boosaaso ee gobolka bari. – Soomaali 24 Media Network
SAWIRRO-DHAGEYSO -Ciidamada Puntland oo qaraxyo ku qabtay Magaalada Boosaaso ee gobolka bari.
Posted on May 20, 2020 Leave a Comment on SAWIRRO-DHAGEYSO -Ciidamada Puntland oo qaraxyo ku qabtay Magaalada Boosaaso ee gobolka bari.
MUQDISHO-SOOMAALI24-Taliska Qaybta Booliiska Gobolka Bari ee maamul goboleedka Galmudug oo kaashanaya Ciidanka PSF ayaa xalay fashiliyay Qarax nooca dhulka la geliyaa oo ay aasayeen kooxo looga shakisanyahay Al-shabaab iyo Daacish.
Qaraxaas oo la doonayay in lagu aaso bartamaha Magaalada Boosaaso ayaa ciidamadu ku guulaysteen in ay gacanta ku dhigaan ka hor intaan la aasin balse waxa goobta ka baxsaday Kooxdii Qarax wadday.
Qoraal ka soo baxay Taliska Qaybta Booliiska Gobolka Bari ayaa lagu sheegay in kooxdii Qarax sidday oo looga shakisanyahay Al-shabaab iyo Daacish ay goobta ka baxsadeen balse gacanta lagu dhigay Gaarigii ay wateen.
Taliska ayaa sidoo kale sheegay in ay wadaan baaritaan ku aaddan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa raggii watay Qaraxa iyo Gaariga oo Magaalada ku dhex fakaday kadib markii la fashiliyay Qorshahoodii.
← DEG-DEG-Axmed Madoobe oo laga qaaday markale talaabo culus iyo gobolka gedo oo ku dhawaaqay gooni u istaag
SAWIIRO-Taliyaha Cusub ee Qaybta Guud Booliiska Galmudug oo xilkii lagu wareejiyey →